Ururka saxafiyiinta K/Afrika oo taageerey doorashadii Suxufiyiinta qurba joogta ee Nairobi
Monday July 05, 2010 - 05:48:18 in Warar Af-Soomaali ah by Super Admin
Johanesburg 14 Setember 2009
Ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee dalka K/Afrika (SOJASA) ayaa si diiran usoo dhaweeyey doorashadii shalayto lagu doortay gudoomiyaha cusub ee saxafiyiinta qurbajoogta ee Nairobi, wuxuuna ururka u hambalyey Maxamed Cabdullaahi Siidii oo loo doortey gudoomiyaha cusub
Gudoomiyaha SOJASA mudane Maxamed Muuse Nuur ( Deeq darajo) ayaa ku tilmaamay arrinta doorashada mid taabogal ah oo muujineysa heerka saxafiyiinta ay diyaar ugu yihiin wax qabad iyo waliba u doodista xuquuqda saxafiyiinta guud ahaan. wuxuu yiri “aad ayaan ugu hambalyeeynayaa mudane Siiddii, waxaana ALLE SWT uga baryayaa in xilka weyn ee loo doortey uu la garab galo mas’uuliyadiisa” .
War qoraal ah oo uu ururka soo saaray ayaa lagu baaqay in isku xir la sameeyo dhammaan saxafiyiinta meel kasta oo ay joogaanba. lagana fikiro sidii loo qaban lahaa kullan guud intii kasoo qeybgali karta.
Cabdinaasir Axmed Sh.Bashiir (saxansoxo) oo ah xoghayaha ururka ayaa yiri “waa in laga gudbaa wixii hore, waa in aan lasoo baxnaa kartideena, isla markaasina codkeena la maqlaa, illaa goormee ayaan ku jireynaa aamusnaan, codkeena dad kale ku hadlayaan” .
Afayeenka ururka Cusmaan Xassan Fantastic ayaa isaguna dhankiisa sheegey in ay talaabadani tahay mid lagu farxo oo wanaagsan. Sidoo kale Saxafi sare
C/risaaq C/laahi Maxamed (indho Jaceyl) ayaa si weyn u taageeray wuxuuna saxaafada dhamaan ugu baaqay in hiil iyo hooba lagu garab istaagaan gudoomiyaha cusub ee qurbo Joogta
SOJASA [email protected]